आजदेखि शुरु भयो भारतमा चुनाव : मोदीको अग्नि परीक्षा - Narayanionline.com Narayanionline.com आजदेखि शुरु भयो भारतमा चुनाव : मोदीको अग्नि परीक्षा - Narayanionline.com
आजदेखि शुरु भयो भारतमा चुनाव : मोदीको अग्नि परीक्षा
काठमाडौं-भारतमा आज (बिहीबार)बाट आम निर्वाचन शुरु भएको छ । आगामी मे महिनाको १९ तारिखसम्म विभिन्न ७ चरणमा हुने निवार्चनलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वको वर्तमान सरकारको जनमत संग्रहका रुपमा हेरिएको छ । विश्वको पाचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको भारतमा हुन लागेको चुनावप्रतिको चासो भारतमा मात्रै नभएर संसार भर नै छ ।
यसअघि सन् २०१४ मा भएको आम निर्वाचनमा नरेन्द्र मोदी र उनको भारतीय जनता पार्टीले ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त गर्दै भारतमा बलियो सरकार निर्माण गरेको थियो । त्यसअघि भारतमा तीन दशकमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याएर सरकार बनाउन सकेका थिएनन् । त्यसबेला स्पष्ट बहुमत ल्याएर कुनै दोश्रो पार्टीको भर नपरी सरकार बनाउन सफल नरेन्द्र मोदीको कार्यकालप्रति भारतका जनता कति सन्तुष्ट छन् र ५ वर्षे कार्यकालमा उनको लोकप्रियता कहाँ पुग्यो भन्ने नतिजा यो चुनावबाट आउने परिणामले प्रष्ट पार्ने छ।
तर, मोदीका लागि यो चुनावमा सजिलो छैन । किनभने मोदी र उनको राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी भाजपा सन् २०१४ को निर्वाचनमा उतिबेला कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारको खरो आलोचना गर्दै जनतामाझ मत माग्न पुगेका थिए । जनताले पत्याएपछि उनी सत्तामा पनि पुगे । त्यो पनि संसद्मा निकै नै प्रभावशाली बहुमतसहित ।
संसद्मा बलियो पकड रहेकाले उनको नेतृत्वमा रहेको सरकारले उनले चाहेको जस्तो सुकै नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने अवस्थामा थियो । विपक्षी अति नै कमजोर थियो भने सत्तामा उनको पकड निकै बलियो थियो ।
‘विपक्षीको कारणले मैले यसअघिको चुनावमा बाचा गरेअनुसार काम गर्न पाइन’ वा यस्तै कुनै बहाना बनाउने अवस्थामा उनी छैनन् । उनको सरकारले गरेका हरेक कामको जस र अपजसप्रति उनी शत प्रतिशत हकदार छन् ।
नरेन्द्र मोदीले पपुलिष्ट नेताका रुपमा आफ्नो छवि बनाएका छन् । उनको पपुलिष्ट छवि र चर्चामा आउने बानी कै कारण पनि उनी भारतीय मूलधारको राजनीतिमा उदाएको भन्नेहरु पनि छन् । पपुलिज्मकै कुरा गर्दा हालै उनले ‘चौकिदार’ भन्ने शब्दलाई भारतीय राजनीतिमा ल्याएका छन्
के कारणले गर्दा मोदीले सन् २०१४ को निर्वाचन भारी बहुमतले जितेका थिए र के मोदीले यसपटक पनि त्यही निर्वाचनमा ल्याएजस्तो भारी बहुमत ल्याउन सक्लान् भन्ने विषयमा भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा विभिन्न टिक्काटिप्पणीसहित बहस भइरहेको छ । त्यसबेला मनमोहन सिंहको नेतृत्वको तत्कालीन सरकार निकै नै कमजोर रहेको र उदयीमान अर्थतन्त्रको रुपमा रहेको भारतलाई आर्थिक रुपमा तीब्र गतिमा अघि बढाउनका लागि बलियो नेतृत्वको खाँचो रहेको औल्याउँदै आफूले उक्त बलियो नेतृत्व दिनसक्ने मोदीको सन्देश थियो । त्यसका लागि मोदीले आफ्नो हिन्दुवादी धार्मिक साँस्कृतिक राष्ट्रवादको मुद्दालाई अघि सारेका थिए ।
भुटान र चीनबीचको सीमामा रहेको दोक्लमको पठारमा भएको घटना होस् वा पाकिस्तानको भूमि भित्रै प्रवेश गरी गराइएका सर्जिकल आक्रमणहरु हुन् आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन उनले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । उनको राष्ट्रवादी छविले यो चुनावमा कति प्रभाव पार्छ ? के मानिसहरु उनको राष्ट्रवादी छविप्रति उत्तिकै आकर्षित छन् ? अनी अर्को मुख्य कुरा के मानिसहरुमा नरेन्द्र मोदीले बाचा गरेजस्तो बलियो नेताको रुपमा प्रस्तुत हुन सफल भए त ? यस्ता अनेक प्रश्नहरु छन्, जसको जवाफ यो चुनावको मतपरिणामबाट छर्लङ्ग हुनेछ ।
त्यस्तै हिन्दुवादी नेताको रुपमा उनले आफ्नो कार्यकालमा ‘साँस्कृतिक राष्ट्रवाद’ लाई भारतीय समाजमै पनि प्रयोग गरेका थिए । विभिन्न शहरहरुको ऐतिहासिक इस्लामिक नामलाई फेरिदिएर त्यसलाई ‘हिन्दुत्वकरण’ गर्ने, विभिन्न धार्मिक समारोहमा निरन्तर पुगिरहने र योगालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराई औपचारिक रुपमै जुन २१ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय योगा दिवस’ को मान्यता दिने यस्तै अनेक कामबाट उनले आफूले अझै हिन्दुवादी ‘साँस्कृतिक राष्ट्रवाद’ लाई नभुलेको सन्देश दिइसकेका छन् । तर, यसबीच फेरिपनि प्रश्न उठ्छ अहिले तीब्र गतिमा आर्थिक विकासको दिशामा अघि बढिरहेको भारतमा के उनको हिन्दुवाद अझै सान्दर्भिक छ ?
त्यसबाहेक उनले सन् २०१४ को आफ्नो चुनावी अभियानमा भारतलाई तीब्र रुपमा आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने बाचा गरेका थिए । विश्वबैंकको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१५ मा भारतको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको बृद्धिदर ८.१५४ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, सन् २०१६ मा त्यो ७.११३ प्रतिशत र सन् २०१७ मा ६.६८१ प्रतिशत थियो । उनको कार्यकालमा भारतमा भएको आर्थिक बृद्धिको प्रभावप्रति भारतीय जनता कति सकारात्मक छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ चाहीँ चुनावको परिणामले दिनेछ ।
सन् २०१४ को निर्वाचनमा उनको मुद्दा भ्रष्टाचारको अन्त्य थियो । भारतमा भ्रष्टाचार विकराल रुपमा रहेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा आउने गरेको छ । पछिल्लो समय उनको कार्यकालमा सरकारका उच्च पदस्थ नेता र अधिकारी नै रफायल डिल र अरु यस्तै किसिमका भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएको समाचार आउने गरेको छ ।
त्यस्तै, गरिबीको निवारण पनि सन् २०१४ मा उनको चुनावी अभियानको मुद्दा थियो । तरपनि भारतमा गरिब किसानको आत्महत्या कम भएको छैन । त्यसबाहेक सन् २०१६ को अन्त्यतिर उनले घोषणा गरेको र निकै आलोचना भएको विषय चाहीँ भारत भर १ हजार र ५ सय रुपैयाँको दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा थियो ।
आफू मुलुकको चौकिदार भएको र आम जनतालाई पनि चौकिदार बनेर देशको विषयमा खबरदारी गर्न भन्दै मोदीले सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न माध्यममा चौकिदारको अभियान नै छेडिएको थियो
उनको घोषणाबाट धेरै नै ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरु खासगरी मध्यमवर्ग र समाजको तल्लो तहका मानिसहरुलाई सकस परेको भन्ने समाचार आएको थियो । तीब्र आर्थिक विकाससँगै भारतमा मध्यमवर्गीय परिवारको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको अवस्थामा मानिसहरुले उनको त्यस घोषणालाई बिर्सिएका होलान् कि त्यसलाई माफ गरिसके भन्ने प्रश्न पनि यो चुनावमा उतिनै सान्दर्भिक छ ।
अर्कोतर्फ नरेन्द्र मोदीले पपुलिष्ट नेताका रुपमा आफ्नो छवि बनाएका छन् । उनको पपुलिष्ट छवि र चर्चामा आउने बानी कै कारण पनि उनी भारतीय मूलधारको राजनीतिमा उदाएको भन्नेहरु पनि छन् । पपुलिज्मकै कुरा गर्दा हालै उनले ‘चौकिदार’ भन्ने शब्दलाई भारतीय राजनीतिमा ल्याएका छन् ।
आफू मुलुकको चौकिदार भएको र आम जनतालाई पनि चौकिदार बनेर देशको विषयमा खबरदारी गर्न भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न माध्यममा चौकिदारको अभियान नै छेडिएको थियो । त्यसबाहेक चुनावको पूर्व सन्ध्यामा उनको जीवनीमा आधारित चलचित्र रिलिज हुने भनिएको थियो । यद्यपि भारतको निर्वाचन आयोगले भने त्यसलाई तत्काल रिलिज हुन दिएन । यस अभियानले चुनावमा कति प्रभाव पारेको होला भन्ने प्रश्न पनि चासोको विषय हो ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले सार्वजनिक गरेका पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार भाजपाले स्पष्ट बहुमत ल्याउने वा त्यो पनि ल्याउन नसके बहुमतको निकै करिब पुगेर सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा यथावत नै रहनेछ । तर यस्ता सर्वेक्षण र टिकाटिप्पणीमाझ भारतमा चुनावी प्रतिस्पर्धा शुरु भएको छ । यो चुनावलाई राजनीतिक दलहरुबीचको प्रतिस्पर्धाका रुपमा त हेरिएको छ नै, त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यसलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अग्निपरीक्षाका रुपमा अर्थ्याइएको छ । अग्निपरीक्षामा मोदी कति खरो रुपमा उत्रिन्छन् भन्ने चाहीँ भारतीय मतदाताले दिने मतले निर्धारण गर्नेछ ।
पाकिस्तान एल. जी संकट गहिरिएसँगै रिफाइनरीहरू बन्द हुने सम्भावना छ